आलुमा गुलाब छेडेर राख्नुहोस् : एक हप्तापछि मात्र हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ चमत्कार ! – Enepali Samchar
November 25, 2020 November 26, 2020 adminLeaveaComment on आलुमा गुलाब छेडेर राख्नुहोस् : एक हप्तापछि मात्र हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ चमत्कार !
काठमाडौं । तपाई, हामी सबैलाई सुगन्धित फूलहरू मन पर्छ । राम्रो सुगन्धको फूलले तपाईंको सम्पूर्ण घरमा एक आरामदायक वातावरण दिन सक्छ । फूलहरू तपाईंको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै बगैचा बनाउन सक्दैन।
गुलाफ रोप्नका लागि आवश्यक सामाग्री
हामीलाई गुलाब उब्जनी गर्न धेरै चीजको आवश्यक छैन । हामी यसलाई थोरै लागतमा घरमा बनाउन सक्छौं । सामग्रीलाई हेरौं ।
गुलाफ आलु भाँडो प्लास्टिकको बोतल माटो आलुमा गुलाफ लगाउने विधि
पहिले गुलाबको फूल लिनुहोस् र त्यसका पातहरू हटाउनुहोस्।
यसको माथिल्लो भाग काट्नुहोस्।
एउटा आलु लिएर यसमा प्वाल बनाउनुहोस्।
त्यो प्वालमा गुलाबको डाँठ राख्नुहोस्।
अब माटोको भाँडाको आधा भाग भर्नुहोस् र त्यसमा आलुहरू राख्नुहोस्।
बाँकी भाँडो माटोले भर्नुहोस्।
एउटा प्लास्टिकको बोतल लिनुहोस् र यसलाई तलबाट काट्नुहोस्।
बोतल गुलाब पेटीओलमा लगाउनुहोस्।
उसलाई हरेक दिन पानी दिनुहोस् र एक हप्ता पछि हेर्नुहोस्।